BAAQII KASOO BAXAY SHIRWEYNIHII 10AAD EE WADATASHIGA XUKUUMADA IYO SHACABKA DDSI. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
BAAQII KASOO BAXAY SHIRWEYNIHII 10AAD EE WADATASHIGA XUKUUMADA IYO SHACABKA DDSI.
Jig-jiga(FMN)—Shirweynihii wada tashiga ahaay ee u socday Xukummada Deegaanka Soomaalida Iyo Itoobiya iyo Waxgaradka Deegaanka oo shalay gelinkii danbe soo gabagaboobay ayaa lagasoo saaray bayaan dheer oo loogaga hadlayo Xaaladaha guud ee Deegaanku waqti xaadirkan ku suganyahay.
Haddaba,waxa aan halkan idinkugu soo gudbinaynaa nuqul kamid ah Bayyaanka oo ay heshay Shabakada Warbaahinta ee Feer-feer Media Network(FMN).waxa uuna uqornaay sidan Socota:-
1. Nabadgalyada Iyo Xasiloonida deegaanka
2. Ladagaalanka Xagjirnimada Iyo Sidii Looga hortagi lahaa
3. Hirgalinta ShirkadaTabac Iyo Maal
4. Caawimaada dadkii kasoo barakacay deegaanka oromada.
5. Hirgalinta qorshaha BBC(Biyo, Baad, Beer, Cilmi Iyo Caafimaad)
BAAQA AYAA LOO DHIGAY SIDAN:
Waxaan taageersanahay nidaamka federalismka ah iyo dastuurka dalkeena itoobiya ee kusalaysan midnimada, wada noolanshaha, sinaanta iyo cadaalada.
Waxaan mar walba uhogaansanahay dhamaan go’aamada kasoo baxa dawlada dhexe iyo dawlada deegaanka soomaalida itoobiya.
Waxaan umahad-celinaynaa ciidamada difaaca qaranka iyo booliska federaalka ee dalku kaalinta laxaadka leh ee ay kaqaateen xalinta khilaafaadka udhexeeya shacabka oromada iyo soomaalida .
Waxaan ugu baaqaynaa dawlada federaalka ah in warbaahinada deegaanada iyo tan fadaraalkaba laga joojiyo dhamaan wixii bulshada dareenkooda kicinaya ee dhalinaya khal-khal iyo jahwareer islamarkaasna amniga dalka wax udhimaya.
Waxaan soo dhawaynaynaa waxkasta oo xal u ah nabada, wada-noolaanshaha, ilaalinta dastuurka qaranka, hirgalinta nidaamka federaalismka ah ee dalkeena itoobiya Gaar ahaana nabad kuwada noolaanshaha deegaanka aan dariska nahay ee oromada.
Waxaan si wadajir ah uladagaalamaynaa islamarkaana aan uga hortagaynaa anagoo gacmaha is-haysana shacab, dawlad iyo ciidanba ficilada xagjirnimada ah ee huwan shaadhka diinteena islaamka iyadoo culimada deegaankeena looga baahan yahay inay dadka baraan diinta si aysan marnaba inoogu dhicin waxyaabaha kadhacaya wadanka aan dariska nahay ee somaliya.
Waxaan lahalgamaynaa sidaan utirtiri lahayn kudhaqanka fikradaha cidhiidhyan ee sida qabyaalada, eexda, nin-jeclaysiga iyo wixii lamidka ah ee caqabada ku ah horumarka iyo nabadgelyada deegaankeena.
Waxaan ladagaalamaynaa sidaan utirtiri lahayn saboolnimada oo ah cadawgeena koobaad si uu dalkeenu uga mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay.
Waxaan sii wadaynaa dadaalada horumarineed, kuwa nabadgelyo iyo kuwa maamulka suuban ee guud ahaanba kahanaqaaday dalka iyo deegaankaba. Waxaana garab taaganahay waxqabadka aan kalago’a lahayn ee xukuumada dalka, ta deegaanka, xisbiga EPRDF iyo XDSHSI .
Waxaan taageersanahay aas-aasida shirkada Tacab iyo Maal(TM) ee loo yagleelay tirtirida fikirka mashaqaystenimada iyo kagudubka yasida shaqooyinka noocyadooda kaladuwan.
Waxaa naga go’an inaan caawino eheladii iyo qaraabadii dadkii kuwaxyeeloobay magaalada AWADAY iyo dadkii soomaalida ahaa ee kasoo barakacay deegaanka oromada. Waxaana taageersanahay dib udajinta ay xukuumadu usamaynayso.
Waxaan si wayn usoo dhawaynaynaa islamarkaana aan diyaar unahay sii adkaynta hirgalinta qorshaha BBC ee laga soo gaabiyay: Biyo, Baad, Beer, Cilmi iyo Caafimaad.
Previous Previous post: Raggii Geystay Qaraxii Udanbeeyay Ee Muqdisho Oo La Ogaaday Aqoonsiyada Ay Siteen.
Next Next post: Koox Dil Ka geysatay Degmada Hodan Oo Gacanta Lagu Soo Dhigay.